RASMI: Real Madrid Oo Dib U Soo Ceshatay Xidig Si Layaableh Isku Soo Muujiyay Iyo Sida Uu Qorshaha Zidane U Badali Karo. - Gool24.Net
RASMI: Real Madrid Oo Dib U Soo Ceshatay Xidig Si Layaableh Isku Soo Muujiyay Iyo Sida Uu Qorshaha Zidane U Badali Karo.
August 12, 2020 Mahamoud Batalaale
Real Madrid ayaa si rasmi ah dib ugu soo ceshatay xidigii xili ciyaareedkan wacdaraha ka soo dhigay kooxda Real Sociedad ee Martin Odegaard. Kooxda Real Sociedad ayaa war rasmi ah ka soo saartay in Martin Odegaard uu ku soo laabtay kooxdii mulkiyadiisa lahayd ee Real Madrid.
Kadib dhawr sanadood oo uu dibad meer ku ahaa kooxo kala duwan oo uu amaah ugu soo joogay, Martin Odegaard ayaa ugu danbayn Zinedine Zidane ku qanciyay in uu qayb ka noqdo qorshihiisa xili ciyaareedka cusub kadib markii uu soo qaatay xili ciyaareed layaableh.
Martin Odegaard oo 21 sano jir ah ayay Real Madrid go’aan rasmi ah ku gaadhay in aanu sii joogin kooxda uu isku soo muujiyay ee Real Sociedad waxaana da’ayrkan loo balan qaaday in uu qayb ka yahay qorshaha xili ciyaareedka cusub ee kooxda kowaad.
Habeenkii uu Martin Odegaard hantay quluunta jamaahiirta Real Madrid iyo macalinkooda Zidane waxay ahayd habeenkii uu Santiago Bernabeu kaga reebay Copa Del Rey ee intii xili ciyaareedkan dhamaadka ah lagu jiray.
Odegaard ayaa habeenkan soo bandhigay qaab ciyaareed uu ku badalay waayihiisii silica ahaa ee Real Madrid wuxuuna jamaahiirta Madrid ku qasbay in ay Santiago Bernabeu iskugu taageen oo ay u sacabiyeen isaga oo xataa kooxdooda ka reebay Copa Del Rey.
War rasmi ah oo ay soo saartay kooxda Real Sociedad ayay ku shaacisay in Martin Odegaard uu ku soo laabanayo kooxda mulkiyadiisa leh ee Real Madrid oo uu amaah kaga maqnaa.
Martin Odegaard oo ka mid ahaa kubbad sameeyaashii xili ciyaareedka dhamaaday ee La Liga ugu fiicnaa ayaa rajaynaya in uu boos joogto ah ka heli doono shaxda Zidane ee xili ciayareedka cusub.
Martin Odegaard ayaa fariin macasalaamayn ah u qoray taageerayaashii kooxda uu ka soo laabtay ee Real Sociedad kuwaas oo uu taageero layaableh ka soo helay.
Maxay Soo Laabashada Martin Odegaard ee Real Madrid uga dhigan tahay Zidane?
Zidane iyo ciyaartoyda kooxda Real Madrid ayaa loo sheegay in ayna jiri doonin ciyaartoy cusub oo ay kooxdu soo iibsan doonto xagaagan, waxayna taas badalkeeda Martin Odegaard u tix galin doonaan sidii uu yahay saxiix cusub oo ay bilaash ku heleen oo kale.
Zidane ayaa Martin Odegaard u adeegsan kara boosas kale duwan oo iskugu jira khadka dhexe iyo garbaha weerarka wuxuuna kooxdiisa ku soo kordhin karaa hal abuur iyo caawinta weerarka oo heer sare ah.
Laakiin shakiga ugu wayn ee uu Martin Odegaard qabi karo ayaa ah in aanu markiiba fursad toos ah ka heli doonin shaxda Zidane balse ay fursadiisu ku xidhnaan doonto waxa uu qabto waqtiyada badalka lagu soo galiyo kulamada bilawga xili ciayareedka.
Laakiin waxaa hubaal ah in Martin Odegaard uu heli doono fursadiisii ugu waynayd ee kooxda kowaad wuxuuna fursad labaad ku helayaa in Real Madrid ayna doonayn in ay saxiixyo cusub oo kale samayso.